Ciidamo boolis oo hor leh oo loo diyaarinayo Gobollada Mudug iyo Galgaduud |
Ciidamo boolis oo hor leh oo loo diyaarinayo Gobollada Mudug iyo Galgaduud
buy Kamagra Polo online, buy clomid online.
Taliska qaybta Booliska Gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa sheegay in ay meel wanaagsan mareyso diyaarinta ciidamo boolis ah hor leh oo loo diyarainaya xoojinta amniga degmooyinka iyo gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Taliyaha qeybta booliska ee Gobolada Mudug iyo Galgaduud Kornayl Maxamed Jimcaale Cosoble oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ay qorayaan ciidamado boolis ah oo cusub oo ka mid ah noqon doono ciidamada iminka ka howlgala Degmooyinka Gobolada Mudug iyo Galgaduud, isagoo intaa ku daray in ciidankaasi ay si gaar ah u qaabilsanaan doonaan sugidda amniga iyo ka hortagga firxadka maleeshiyaadka Shabaab ee gobolada Dhexe.
Kornayl Maxamed Jimcaale Cosoble ayaa xusay in uu kulamo gaar gaar ah la qaatay taliyeyaasha saldhigyada booliska ee labada Gobol, oo ay uga wada hadleen sidii ciidanka cusub loo siin lahaa tababaro, isagoo intaa ku daray in gaadiidkii ay ku shaqeyn lahaayeen goor hore la diyaariyay.
“Taliyeyaasha saldhigyada ayaan la kulmay waxaana isla garanay in tabar la siiyo askarta cusub, waxaa kaloo diyaar ah in marka uu tababarka u soo idlaado la qalabeyn doono, si ay u gutaan waajibaaka ka saaran sugidda amniga iyo ka hortagga waxkasta oo amni darro abuuri kara” ayuu Kornaylka hadalkiisa ku soo gabo gabeeyay.